10 Literary Review Blog iji nweta akwukwo ozo nke oma. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Gwa m akwụkwọ: blọọgụ 10 ịhọrọ ọgụgụ gị ọzọ.
Ana Lena Rivera Muniz | | Digital ụwa
Peeji 10 iji kpebie ọgụgụ gị ọzọ.
Lee, ahapụrụ m gị otu nhọrọ nke blọọgụ nyocha ederede ebe ịchọta ezigbo aro iji gụọ. Dịka na ndepụta niile, enweghị ha niile, n'ezie amaghị m ha niile: Enwere ọtụtụ ma dị ezigbo mma, mana ọ gaghị ekwe omume itinye ha niile. Ihe m nwere ike ime bụ ijide gị na na ndepụta a ị ga-ahụ akụkọ ndị ị ga-ahụ n'anya.
1 Anika n'etiti akwukwo
2 Akwụkwọ niile
3 Akwụkwọ na Akwụkwọ
4 Ihe ofgụ Ihe letọ
5 Akwụkwọ ọrụ
6 Akwụkwọ Aeterna
7 Akwụkwọ otu ụbọchị
8 Kedụ akwụkwọ m gụrụ
9 Ikwiikwii n'etiti akwụkwọ
10 Agụ Nwanyị:
Anika n'etiti akwukwo
Nke mbụ, onye ọsụ ụzọ na nke a nke blọọgụ: Ọ malitere na 1996, mgbe enweghị ekwentị. O doro anya na Anika Lillo bụ onye ọhụụ na onye ọsụ ụzọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile, site na nhọpụta nke akwụkwọ ya na ụzọ o si ekwurịta okwu na web. Uche gi banyere akwukwo bara oke uru. Ọdịnaya dị iche iche nke ukwuu, yana ihe karịrị nyocha 12.000, karịa karịa, iji chọta akwụkwọ anyị zuru oke. Na mgbakwunye, ọ na-ahazi raffles. Ileta blog pịa ebe a
Ekwesịrị m ịsị na blọọgụ edemede ọ bụla nwere ngalaba akwụkwọ mpụ mpụ na ihu ihu na-emeri obi m dịka onye na - agụ ya. Ọ bụrụ na otu ihe ahụ na-eme ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, nke a bụkwa ebe gị. Na mgbakwunye, a na-egosipụta uri na akwụkwọ ntorobịa na ohere nke ha. Na, maka akụkụ ndị ọzọ, akwụkwọ niile nwere nhọrọ dịgasị iche iche nke ga-enye echiche nye onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ ọkụ ọkụ maka akụkọ. Ileta blog pịa ebe a
Akwụkwọ na Akwụkwọ
Ọtụtụ dịgasị iche iche na nhazi ọkwa nke ihe karịrị iri atọ. Ahụkebe maka ndị na-achọ echiche maka otu akwụkwọ ma ọ bụ maka ndị chọrọ ịnwale na-enweghị ihe egwu.
Akwụkwọ m na-agụ
Otu n'ime ọkacha mmasị m, ahụrụ m ya n'anya. Ọ bụ blog nkewa nke otu nke mere ka ọ dị mfe ịchọ ihe masịrị gị. O nwere ọtụtụ nyocha, ọbụnadị nyochaa akwụkwọ ndị bipụtara onwe ha na Amazon nwere mkpebi dị mma. Dika o bu blog nke onwe, o dighi oke, ma o zuru oke ma onye edemede dere ya nke oma, nke oma na njirisi. Anyị anaghị ekwenye mgbe niile, mana ọ na-enye m echiche iji tụgharịa uche na ya. Ileta blog pịa ebe a
Ihe ofgụ Ihe letọ
"Ọ bụ nnukwu obi ụtọ. Nọgide na-agụ ihe, ”ọ na-ekwu na nkwupụta ya.
Otu blọọgụ na-anakọta ụdị niile, nke a na-ahụ anya, yana imepụta na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ihe na-adọrọ uche anyị n'oge dị mkpirikpi. Maka ndị chọrọ ihe a kapịrị ọnụ, ọ nwere igwe nyocha ọchụchọ. Ihe mkpali: akwụkwọ raffles. Ileta blog pịa ebe a
A blog nke na-enye gị ohere ịchọ site na ụdị ma ọ bụ site n'aka onye edemede, yana ọtụtụ akwụkwọ enyocha. Enweghị ike ịchọta ihe ị na-achọ. Enwere ọtụtụ ndị na-enyocha, n'agbanyeghị nwoke ma ọ bụ nwanyị, yabụ ka oge na-aga, ị ga-ejedebe na "ndị nyocha" kachasị amasị gị. N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-ahụ akwụkwọ gị. Ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na - agụ akwụkwọ ahụ na - eme ihe mbụ dịka onye edemede, nke a bụ blog gị: enwere ngalaba ebe ị nwere ike bipụta akụkọ gị. Ileta blog pịa ebe a
10 Blọọgụ ịchọta akwụkwọ ndị ahụ ị ga-agụ n'otu ịga.
A blog ebe ị na-eche n'ụlọ: nkewa site na ụdị ka ị ghara igbu oge na-achọ ihe ịchọrọ n'etiti nyocha ha. Ọ bụghịchacha, dị anya na ya n'ihi na ọ bụ blog nkeonwe, mana a haziri ya nke ọma, onye ode akwụkwọ na-enye echiche na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị jikọọ na ụdị ya, a ga-ejide gị n'ezie! Ileta blog pịa ebe a
Akwụkwọ otu ụbọchị
Ọ na-emezu nkwa aha ya, "Akwụkwọ otu ụbọchị", a ga-enyocha ha kwa ụbọchị ma nyocha ha nke ọma. Enwere ndị 10 na-enyocha ma, ọ bụ ezie na nke ọ bụla nwere ụdị ha, blog nwere akara aha.
Ọ bụ blọọgụ ịfu n'ime ya, ịchọgharị, wụpụ ma gbanwee ma enwere ọtụtụ ihe iji mee ya. Iji gaa ọsọ ọsọ, ihe kacha nso ịbanye n'ụlọ ahịa akwụkwọ na-enweghị ebumnuche. A blog nwere ya na nchọgharị ọkacha mmasị. Ileta blog pịa ebe a
Kedụ akwụkwọ m gụrụ
Maka ndị chọrọ nkwa nke ihe ịga nke ọma, ebe a, ị ga - ahụ ndị na - ere ahịa kachasị mma, ndị mmeri, ndị tozuru oke, wdg ...
Chọta ihe ị ga-agụ ngwa ngwa wee mee ka ọ dị mma na-enweghị mgbagwoju anya na ndụ gị. Ileta blog pịa ebe a
Ikwiikwii n'etiti akwụkwọ
Ọ bụ obere blọọgụ ma mee nke ọma. Site na nyocha vidio na YouTube, ngalaba akwụkwọ mpụ nke meriri m, yana ajụjụ ọnụ na ndị edemede. Nakwa akụkụ nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, mbipụta onwe ya na akwụkwọ ihe nkiri. Ọ na-elekwasị anya na ndị kacha ere ahịa na ozi ọma, zuru oke ile anya ma mara ihe ị ga-ahụ n'ụlọ ahịa akwụkwọ, ma ọ bụ nke mebere ma ọ bụ nke dijitalụ. Ileta blog pịa ebe a
Site na ihe eji eme ihe na ihe ọchị, akwụkwọ nke ọtụtụ dị iche iche, raffles na klọb n'ịntanetị ebe ị nwere ike ịkekọrịta echiche gị na ndị ọzọ. Ukwuu na-atụ aro. Ileta blog pịa ebe a
Na, dị ka ọnụ, ọ bụrụ na dị ka m, ị bụ onye na-akwado akwụkwọ akụkọ mpụ, ana m ahapụ gị otu ndụmọdụ ikpeazụ: akwụsịla ịgagharị Ọkacha mmasị m nchọpụta. O siri ike ịchọta onye omekome na-enweghị ohere na blog a. Ejila imewe ya mehie ya: ọ dị mkpa maka ndị hụrụ ụdị a n'anya. Ọ na-agbakọta ihe odide ahụ n'ụzọ zuru oke ma enwebeghị m ike ịchọ onye nyocha, onye nchịkwa ma ọ bụ onye nyocha nke m na-ahụbeghị. Matakwu banyere ọkacha mmasị gị onye uwe ojii pịa ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Digital ụwa » Gwa m akwụkwọ: blọọgụ 10 ịhọrọ ọgụgụ gị ọzọ.
Gaa ma debanye aha maka ndepụta ndị na-esonụ. Daalụ!
Zaghachi Ana Lena Rivera Muñiz
Ndi mmadu nwere ike ikwu akwukwo nke onye edemede Audrey Carlan dere na akwukwo a bu ihe omuma?
Zaghachi Nancy García Lòpez
Ọ ga-adabere na ọganihu ọ pụtara maka gị na ihe ịchọrọ iji nweta ọgụgụ gị.
amaghi ama dijo
Ana m ahapuru gi instagram @ the.books.paradise ebe m ga-ebugote aro akwukwo ugboro ato n'izu, i nwekwara ike inye azịza gi na akwukwo nke gi nke ichoro ka m bulite.
Ndewonu ehihie oma.
Anọ m nso nso a na-agwa enyi m na ọ na-agwa m banyere akwụkwọ ndị ọ gụrụ na na ya echetaghị aha ndị ahụ (n'ihi na ọ nwekwaghị ha). Offọdụ n'ime ha nwere ike inyere gị aka ịchọta ha site na nyocha isiokwu dị na Google, mana enwere otu nke na-apụtaghị anyị.
ihe ọ gwara m banyere akwụkwọ:
-ọ ochie. Ọ zụtara ya mgbe ọ dị obere na ahịa flea.
-Ọ dị ka fantasy. odi ka akuko ifo.
-Ọ bụ doro anya. o doro anya na ihe nkiri a bit risqué na-anọchi anya.
-ndị ọhụụ ahụ kpuru ìsì mana na-ese ihe.
-o nwe nwa nke Chineke.
(ebe a, ncheta gị ga-esiwanye ike ma ị maghị)
- A na-ewere ya na obodo ma ọ bụ agwaetiti ebe ha bi dịka ọ dị n’elu osisi ma na-anwụ anwụ.
Ọ ga-amasị m ịchọta akwụkwọ ahụ ma nye ya ụbọchị ọmụmụ ya, ọ ka dị, mana ọ ka mma ịmalite n'oge na-adịghị anya wee mee ya.
O buru na onye ma ihe bu akwukwo m na ekwu maka ya, biko daalụ xddd
Zaghachi Yamile Leinaly Martínez Zamora
Amalitela m ịbanye n'ime ụwa ịgụ mana m gara leta ndị a, ee, ha dị mma, ọkachasị ọnụ ụzọ Kedu akwụkwọ m gụrụ ebe ọ na-akuziri gị ọtụtụ akwụkwọ iji bido ịgụ, ma ọ bụrụ na ịmeghị mara ụdị ị gụrụ na mbụ ma ọ bụ akwụkwọ ị ga-amalite, ị kwesịrị ịga leta ya.
Na mbido nke na-ejide gị ruo mgbe njedebe dị egwu. Otu n'ime akwụkwọ na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe ọgụgụ. Onye dere akwụkwọ a bụ onye edemede na-eto eto nke kwere nkwa na akwụkwọ akụkọ mbụ ya ga-adị mkpa ka ọ baara gị uru.
Chọrọ ịnọgide na-agụ ihe.
Na-atụ aro 100%
M na a na-achọ na clubdellibro.es maka ụbọchị na ezi ndenye na reviews nke ụfọdụ akwụkwọ. Ọ bụ ezie na ndepụta dị mma
KPỌRỌ KWESARA KWESPLR,, IFỌD I M MARA MA,
M GA-EJE EZE N'THELỌ KWESESTR TO SELỌ IHE M chọtara
N'ỌZỌ Ebe a ka m kwadoro gị ọkacha mmasị m,
Ezigbo BLOG nke na-ekpuchi agbụrụ nile, Ọ B FROM SITE NA ỌG REGND AKW OFKWỌ ỌB THER AND ỌBIBR AND NWA NA FEMM FEM ỌR FEMA NKE NA-EME WHOFỌDE Nyocha NA-EME KA G TO
Ka anyị chekwaa ndị na-ere akwụkwọ biko, ha ga-apụ n'anya dị ka dinosaurs, ndị na-agụ akwụkwọ nwere ọgụgụ isi kwesịrị igbochi ka ha wee ghara idebe ụlọ ahịa na-emechi emechi ka anyị na-edeba akụkọ nde ndị nde banyere ndị ọchụnta ego n'ịntanetị ma chefuo ihe na-atọ ụtọ ọ bụ ileta saịtị ndị ahụ zuru ezu nke akwukwo ebe n'azu akwukwo enwere onye gha agha ima uzo iji nyere gi aka ka ichoputa ihe kachasi nma gi, onye gha agwa gi okwu site na ihe omuma na amam ihe nke akwukwo kachasi nma, oria ojoo a ebula otutu umu aka ahia ndi huru oru ha n'anya. ebe ndị ọzọ nọgidere na-ejupụta n’akpa ha
Ka anyị dịrị n'otu, tupu a na-ere akwụkwọ naanị na ụlọ ahịa akwụkwọ, ugbu a na n'emeghị ihere, ha na-eme ya n'elu ikpo okwu ọ bụla mana oge niile n'ihi na anyị ga-ekwe ya.
Stephen King, usoro ihe omuma ya, na mmekorita nke oru ya.